I-Casa Bio Nueva: Iimbono eziphezulu zolwandle, i-pool eshushu, igadi, i-A / C, i-wifi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGrupo ACE Rent, Sl
UGrupo ACE Rent, Sl ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu egqibeleleyo kwimeko yangoku, ine-pool yangasese kwaye ikwindawo ethule kakhulu imizuzu emi-5 ngebhayisikili okanye ngemoto, iilwandle ezihlala zingenanto abantu. Yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela indlela yokuphila yeMeditera, ukonwabela ilanga, ulwandle, iindawo ezikuyo, iilwandle ezininzi ezisentlango kunye neepaki zayo zendalo.
Indlu ineembono ezimangalisayo zolwandle, ibekwe kwindawo ekhethekileyo, ezolileyo kwaye eqhagamshelwe kakuhle ye-El Tosalet, eyimizuzu emi-5 ngemoto ukusuka elunxwemeni ...
Indlu yeyokwakhiwa kwezinto eziphilayo, apho kusetyenziswe izinto zendalo kunye nezizinzileyo ezifana nelitye, i-cork, iinkuni, izitena ze-ceramic, iithayile, i-granite, ipeyinti esekwe emanzini ... kwaye i-passive, ineepaneli zelanga zamanzi ashushu , it has isitiya eziphilayo into wayinkcenkcesha emvula ukuba yande equleni kunye nenkqubo zokufudumeza of indlu kunye namanzi pool ke matshini kakhulu amandla ombane kancinci. Eyona ndawo ibukekayo yendlu yindawo yophahla apho unokonwabela iimbono ezimangalisayo nezibanzi zolwandle kunye nemibala emihle yesibhakabhaka ekutshoneni kwelanga kunye nethafa elikwindawo yamachibi. Enye inxalenye enomtsalane kakhulu yigadi ephilayo kunye nemithi yeziqhamo (i-grapefruit, i-orenji, ikalika, ilamuni, ikhiwane, iavokhado, i-custard apple, imango, ipapaya kunye nerharnati) apho kuthatyathwa khona iziqhamo zazo xa sele zilungile. Inamagumbi ama-3 aqaqambileyo aphindwe kabini adityaniswe kakhulu kunye negadi enegumbi layo lokuhlambela langoku elineshawa yokuhamba, nganye inegadi yayo encinci ukuba ibe nendawo yayo yabucala yangaphandle. Inechibi elishushu elisetyenziselwa ukusetyenziswa rhoqo ngenyanga yonyaka, ijikelezwe yindawo enkulu ukuze ikhululeke ngee-hammocks kunye neemethi. Igumbi lokuhlala - igumbi lokutyela liyamangalisa ngenxa yokuphakama kwesilingi yi-5m kunye nodonga lwamatye olomileyo olwenziwa ngamagcisa asekhaya aqingqe ilitye, enendawo yomlilo emnandi kwaye idityaniswe neveranda entle ejonge echibini. Ikhitshi enesiqithi iqhagamshelwe kwigumbi lokuhlala - igumbi lokutyela. Ecaleni kwekhitshi kukho igumbi lokutyela langaphandle, elishushu kakhulu ukonwabela ilanga. Kumnyango wenkonzo kukho igumbi lokuhlamba impahla, elinegumbi eliluncedo, umatshini wokuhlamba osebenzayo kakhulu kunye nesomisi.
Le ndlu ilungele naliphi na ixesha lonyaka, ehlotyeni yokuqhelwaniswa wayo ngasentla, impepho ulwandle, zendalo isivalo yokugquma, onke amagumbi ziye window eziliqela yokuphefumla cross yenze kakhulu aphozise nazo zonke magumbi umoya kunye fan kwaye Ebusika ngayo ishushu kakhulu kuba ineefestile eziphakamileyo kakhulu ukwenzela ukuba ilanga lasebusika, elithambekele ngakumbi, lingene, ukufudumeza okuphantsi kunye nomlilo kunye nekhasethi. Indlu ineendawo zangaphandle emazantsi nangasentla ukuze ikwazi ukuba ngaphandle unyaka wonke kwaye ujabulele umthunzi ehlotyeni kunye nelanga ebusika.
Yenzelwe ukonwabela ukuhlangana kwakhona kosapho okanye nabahlobo, inokuba yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa kunye neentlanganiso zeqela labasebenzi.
Indawo ekuyo izole kakhulu, ithe cwaka kwaye ikhuselekile, sinenkonzo yokhuseleko iiyure ezingama-24 kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki. Kukho iofisi encinane yabamelwane, apho banokuprinta uxwebhu oluncinane baze bafumane iipakethe.
Sinikezela ngeenkonzo zokuhlala ekhaya, apho sinokukunceda ukuba uthenge ekhaya, ubonise iindawo zokutyela ngokukhetha ukuqokelela okanye ukuhanjiswa ekhaya, uqeshe umpheki opheka ekhaya kwaye siya kukushiya iimaski, iiglavu kunye neehydrogel. ukuququzelela iihambo esitratweni.
Umbuki zindwendwe ngu- Grupo ACE Rent, Sl
UGrupo ACE Rent, Sl yi-Superhost
Inombolo yomthetho: VT-452956-A